Tuesday April, 24 2018 - 20:53:53
Monday March 20, 2017 - 13:41:58 in by salman abdi
Waxaynu muujin doona dhiganayal ku tusin kara sida ugu fiican ee aad u samayn karto qorshe cad, waa hadii sidiisa loo raaco. Wax walba ujeeda ka dambaysa
Qorshaynta ama mudaynta waxqabadka waxa Aasaas u ah inaad qorto oo aad sugto, kentana qorshe cad oo la qaban karo, waa inuu qorshahaagu noqda mid qoran oo la jaanqaadi kara xaaladkasta oo aad ku sugantahay, yaanu kaa noqon waxan la qaban Karin ama aan la gaadhi Karin, taso keeni karta niyad jab iyo guul-daro xanuun badan.
Ka saar naftaada khiyaliga, cabsida, kalsooni la’aanta iyo daciifnimada aad naftaada ku tuhmaso, noqo qof karti leh oo awoodisa aaminsan, ugu bushaare inad gaadhi karto ama qaban karto waxad doonto, laakin ogow waa inuu suuragal yahay.
Waxaynu muujin doona dhiganayal ku tusin kara sida ugu fiican ee aad u samayn karto
qorshe cad, waa hadii sidiisa loo raaco. Wax walba ujeeda ka dambaysa waa inad garata ama filata waxaka soo bixi doona ama maxsuulku wuxu noqodoono.
Tusaale:- waxan rabaa inaan quraanka dhameeyo bil gudeheed,sideen ku dhamayn karaa?, sideey macquul ku tahay inaan dhameehyo quraanka?Ma kula tahay inad quraanka kariimka ku dhamayn karto akhriskiisa mud bil ah?.
Jawaabta oo gaaban waaHaa!, Haa waan dhamayn karaa hadaan keeno nidaam macquula, adoon joojin dhamaan hawlahagaa maalin-nimo waxad awood iyo karti u leedahay inad dhamayso akhriskaQuraankakariimka ah mudo ku simanhal bil, wax wal oo la qabanahyo waxa la eega dariqa ugu dhaw ee loo maray iyo sida looga gun gaadhi karo.
Hadad salaadkasta oo aad tukato kadib akhrido4 safxadoodoo quraanka kariimka ah waxan filayaa inad dhamayn karto bal ila qiyaas masaladan.
Shanta saladoodee maalinti iyo habeenki hadad akhrido4safxadood oo ka mid ah quraaka waxay ka dhigatnatahay hal jus oo20 safxadooda ah(5 X 4 = 20) hadii maalintii iyo habeenkii aad akhrido 20 safxadood balku dhufo 30 cisho (20 x 30 = 600) quraankaminayad ku dhamayn Karin hadad racdo nidaamkas hadad kabadisana waxad awooda inad ku dhamayo waqti ka yar bisha.
Tusaalahaniwuxuu markhaati cad u yahay inad qabankarto waxkasta oo aad doonaso inad qabsato hadii aad u samayso qorshe iyo nidaam go’aan adag iyo casiimo fiican wata.
Waxad tahay adoon Alle karaameeyay, waxa aduunka dulsaarana adaa ugu fadli badan, waxad leedahay garasho iyo garwaaqsi rabi kaga fadilay dhamaan waxa makhluuqa ee aduunkan korkiisa inal asaaran, bal u fiirso xayawaanku malaha garasho iyo garaad haga, waxayse garanayaan baahida haysa siday u maarayan lahayeen, duurjoogtu waqatigay gaajoodan waxay u dhaqaaqaan siday u ugaadhsan lahaayeen dad iyo duunyo toona ma yaqanan xayawanada halista ahi markay dareemaan gaajo.
Hadad ila qadatay qorshaha iyo mihiimada uu leeyay bal ila eegtusaalekale oo mihiim ah Ka soo qaad inad tahayganacsadean lahayn ganacsi waynayan ama sidaas u waynayn, waxad maalinti iyo habeenkii oo dhan hesha dakhli ugu yaraan gadhay $20oo faa’iida, hadad habeenkasta lacagtaas $20ah meel dhigto bishii waxay ku noqon doona lacag aad u badan markaad eegto sida yared ku samaysay ($20x30cisho= $600).
Hadad mudo lix bilooda ku wado nidaamkas waxaan huba inad ku soo sari karto dhaqaale ku dhaw saddex kun oo dooler ($3000) bal ila eeg hadaynu raacno nimaad xisabeedkan ($20 x 180csho =$3600, 180 cisho waa lixdii bilood oo aan u badalay maalmo, hadad mudo sanada wadana waxay noqondoonta $20X360cisho= $7,200) kaba soo qaad inad mudo shan sana sidan ku wado adoon xisaabin dhaqaale kale oo meel kasoo gala ama faa’iidada kale meherada hadad sanadkii soo saari karto lacag dhan $7,200shanti sano imisad so saari kartaa($7,200 x 5 = $36,00)nidaamkani waa nidaam kugu hagi doona inad samayso dhaqaale fiican, hadad ka dakhli badantahay oo maalintiba ku so gasho lacag ka badana sidaas oo kale ayad u maamuli kartaa, tusaale hadi rasamalka ku soo gala maalintii yahay$50bishii waxad soo saar kartaa($50X30 = $1,500hadii aad bishi soo saari karto lacagta intaas leeg sanadkii maxad soo sari karta ($1,500X12=18,000, hadi aad mudo shan sana ku wadana waxay noqdoonta lacag ku dhan$18,000X5 =$90,000) adoon cid kale u dhibin xoolahaagi ama hagbadba galin.
Mudo kooban waxad ku noqon doonaa qof dhaqaale fiican haysta, waxad ku daadasha bal sided u soo saari lahayd dhaqaale fiican.
-Yool Cad ama Qorshe cad
-Kala saariida mihiimada qorshayasha mihiimka ah iyo kuwa aan ahayn
-La xisaabtanka nafta
-Ilaalinta Qiyamkaaga Nololeed
-Ka Hortaga khatarta ka hor iman karta
-Yaraynta fikrika faraa badan ee waqtiga badan ka qadanay
La soco Qaybta Labaad ee Qorshaha
Wixii tallo ama toosina igu soo hagaaji Ciwaankan .Xamse5581@gmail.com
W/Q: Xamse Cali Yusuf
Malaysia:-Nin Xamaas ka tirsan oo lagu toogtay Malaysia
22/04/2018 - 10:22:11
Hargeysa: Boqor Buur-madow Oo Damiin Lagu Sii Daayay+Cidda Damiinatay Iyo Eedaha Loo Haystay
21/04/2018 - 15:01:25
Korea:-Kuuriyada Koonfureed Oo Joojisay tijaabaada nukleyrka Lagu Sameeyo Dalkeeda.
21/04/2018 - 08:03:21